Evernote dia mampiditra asa amin'ny naoty malaza ka mampitombo ny famokarana | Avy amin'ny mac aho
Evernote dia mampiditra asa ao amin'ireo naoty malaza ka mampitombo ny vokatra
Toni Cortes | 04/06/2021 22:00 | Fampiharana hafa ho an'ny Mac
Ny fampiharana malaza Evernote Hitsahatra tsy ho fampiharana fotsiny izy hitantanana naoty, ary miaraka amin'izany dia azonao atao koa ny mifehy ny asanao, ka mampitombo be ny vokatrao rehefa mitantana ny asanao isan'andro any amin'ny toeram-piasana, ary maninona no tsy amin'ny sehatra tsy miankina ihany koa. , raha olona be atao ianao.
Ity fanitarana andraikitra ity dia mbola tsy miasa, satria efa nambarany androany, ary hampiharina tsikelikely amin'ny herinandro ho avy. Fantatrao ve fa afaka andro vitsivitsy dia ho tonga ny Evernote Evernote Task....
Mihoatra ny folo taona fa ny kinova Evernote voalohany dia natomboka, ary nanjary iray amin'ireo fampiharana malaza indrindra mamorona sy mitantana naoty amin'ny fitaovanao, na amin'ny solosaina, na takelaka ary finday avo lenta amin'ny sehatra rehetra.
Ary ao amin'ny azy bilaogy ofisialy, vao avy namoaka izy fa io fitantanana ny naoty io dia hitarina atsy ho atsy, ary ho azonao atao izany, fa amin'ny asa. Midika izany fa azonao atao ny manampy daty, fanairana, fampahatsiahivana, timestamp, sns.
Nanjary asa ny naoty
Ankehitriny, ny beta voalohany miaraka amin'ireo fiasa vaovao ireo dia natomboka, ary antenaina fa afaka herinandro vitsivitsy dia hisy fanavaozana ho an'ny mpampiasa rehetra hiasa tanteraka. Ireo no vaovao manolotra antsika i Evernote Task:
Manatsara ny fizotran'ny asa. Rehefa miara-mipetraka ny naoty sy ny lahasa dia tsy ilaina ny manapa-kevitra ny amin'izay hitranga ao anaty naoty eo alohan'ny mpitantana ny asa na ny lisitry ny raha-hatao.
Jereo izay tokony hataonao isan'andro sy ny antony.
Mametraha fe-potoana ary asio fampahatsiahivana mba hiseho amin'ny fotoana mety ny asa mety.
Mampiasà fanairana mba hisorohana ireo asa tsy ho very amin'ny fifangaroana isan'andro, na dia tsy ampiasaina aza ny Evernote.
Zahao izay zava-dehibe mba hahafahan'ny ezaka mifantoka amin'izay zava-dehibe indrindra.
Makà fomba fijery famintinana isaky ny lahasa miandry, na topy maso ny tontolon'ny tetikasa iray.
Miasà amin'ny lalanao. Natao hametrahana fomba fiasa tsy manam-paharoa, ny mpampiasa dia afaka manasokajy ny lahasa isaky ny fanamarihana, ny daty voatondro na ny satan'ny voamarika ary mampiasa sivana hijerena ny fampahalalana rehetra.
Hanana fanovana natao amin'ireo asa nohavaozina eo no ho eo ianao amin'ny fahitana sy amin'ny fitaovana tsirairay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Fampiharana hafa ho an'ny Mac » Evernote dia mampiditra asa ao amin'ireo naoty malaza ka mampitombo ny vokatra